Tuesday March 17, 2020 - 13:39:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaalyahanada imaarada Islaamiga ah ayaa wali halkoodi kasii wada dagaalka ay kula jiraan ciidamada xukuumadda dabadhilifka Kaabul, saacadihii lasoo dhaafay weeraro dhiig badan ku daatay ayaa lagasoo calaamadeeyay gobollada kala duwan ee wadankaasi.
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxay xaqiijinayaan in ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan weeraro kala duwan ay ka fuliyeen goobo katirsan wadanka waxayna ku dileen tobanaan askari.
Wilaayada Helmand ee dhacda Konfurta dalka Afghanistan waxaa ka dhacay Labo weerar oo culus kuwaasi oo mujaahidiinta dhaalibaan ay la beegsadeen saldhigyo maleeshiyaatka Xukuumada daba dhilifka Kaabul ay ka sameysteen degmooyinka Lashkar jaah iyo Naad cali waxayna weeraradaas ku dileen 22n askari iyagoo dhaawacay 7 kale.
Dhanka Wilaayada Sarbal oo dhacda Waqooyiga dalka Afghanistan waxaa ka dhacay Weerar qorsheysan kaasi oo sigaar ah kaga dhacay degmada Sayid Abaad waxeyna Mujaahidiinta weerarkaas ku gubeen Afar gaari oo noocyada Gaashaaman ah, tiro askar cadowga katirsana dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen weerarkaas.
Mujaahidiinta Taliban ayaa maalin walba weeraro ku qaada saldhigyada maleeshiyaadka dowladda maadaama aysan qeyb ka aheyn heshiiskii xabad joojinta ahaa ee Mareykanka iyo mujaahidiinta ku dhaxmaray magaalada Dooxa ee wadanka Qadar.
Daalibaan ayaa maamusha 70% dhulka wadanka Afghanistan waxaana lafilayaa in imaarada islaamiga ah ay camamito wadanka oo idil marka ay ciidamada Mareykanka si dhameystiran uga baxaan wadanka horraanta sanadda 2021-ka